eGlobalTranslate - ဘာသာစကားမျိုးစုံပါဝင်သောအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာခြင်း
Automation & စီမံခန့်ခွဲမှုအဆောက်အအုံ
eCity အရာများ၏အင်တာနက် (IoT) စနစ်များ
eCity IoT / IIoT ပလက်ဖောင်း
eCity IoT / IIoT တိမ်
eCity IoT / IIoT အသုံးပြုမှု - မှုများ
eHouse အဆောက်အ ဦး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)
eHouse Building Infသို့မဟုတ်mation Modeling ( BIM )
eHouse အလိုအလျောက်တည်ဆောက်ခြင်းစနစ် (BAS)
eHouse LAN (Ethernet) တည်ဆောက်ခြင်းအလိုအလျောက်စနစ်
eHouse One (RS422) ဆောက်လုပ်ရေးအလိုအလျောက်စနစ်
eHouse pro စပ်, BMS ဟာ့ဒ်ဝဲ
eHouse ဆာဗာ + တိမ်တိုက် + ပလက်ဖောင်းဆော့ဝဲ
eHouse စမတ်အိမ်သုံးစနစ်များ (SH)
ဝိုင်ဖိုင် eHouse စမတ်အိမ်
eHouse နိုင် + RF စမတ်အိမ်
eHouse မျိုးစပ်အသုံးပြုမှု - မှုများ
eGlobalTranslate - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အလိုအလျောက်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်နေရာချထားခြင်းအတွက်စက်မျိုးစုံဘာသာပြန်ဆိုသူ။ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်စက်ဘာသာပြန်ခြင်း (MTaaS) ။
eGlobalTranslate သည် Artificial Intelligence Machine Translator 100 ကျော်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများရန်။
မူရင်းအကြောင်းအရာကိုဘာသာစကား ၁၀၀ ကျော်သို့ဘာသာပြန်ဆိုပါ
အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများဖြင့်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ခြင်း (မူလပမာဏထက်အဆ ၁၀၀ ကျော်ပိုများလာခြင်း)
မည်သည့်အတွက်အနေအထားကိုတိုးမြှင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ဘာသာပြန်ထားသောမည်သည့်ဘာသာဖြင့်မဆို
Generation Leads၊ Whole World မှအသွားအလာနှင့်ဘာသာပြန်ထားသောမည်သည့်ဘာသာကိုမဆိုထုတ်ပေးသည်
မဆိုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အော်တိုကြော်ငြာခြင်းအာမခံ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ကမ္ဘာလုံးအတွက်
ဘာသာပြန်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြသပါ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် မည်သည့်ဘာသာစကားအတွက်မဆို - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ (World-Wide)
Check + သွင်းကုန် + ဒက်ကုဒ်ဖိုင်များစစ်ဆေးပါ
AI စက်ဘာသာပြန်ခြင်း + အတည်ပြုခြင်း
ဖိုင်တွဲ + ပို့ဖိုင်များ
။စာတို - စာသားဖိုင်များ
.HTML, .HTM - HTML ဖိုင်များ
.XML - XML ​​ဖိုင်များ
.RTF - စာသားဖိုင်များရောက်ရှိပါ
.SVG - အရွယ်မှာ Vector Graphics Files
.SQL, .CSV, .DB - ဒေတာများအခြေပြုသည့်ဖိုင်များ
အခြားပုံစံများကိုတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မှာယူနိုင်သည်
ASCII သို့မဟုတ် UTF-8 ဘာသာပြန်အတွက်အရင်းအမြစ်ဖိုင်များလိုအပ်သည်။
သက်တမ်းရှိအရင်းအမြစ်ဖိုင်များကိုဘာသာပြန်သူသို့သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောပုံစံများကိုဒီကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီဖြည့်ထားသည်။
စာသားကိုတစ်ကြောင်းတည်းသောတစ်ပြိုင်တည်းဘာသာပြန်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းတွင်စာကြောင်းတစ်ချောင်းထက်မပိုပါစေနှင့်။ "Enter" ကိုဝါကျအလယ်တွင်မထည့်ပါနှင့်။
စကားလုံးအချို့ကိုဘာသာပြန်ခြင်းမပြုရလျှင်ပူးတွဲပါ notranslate.txt တစ်ခုတည်းသောလိုင်း၌ခြွင်းချက်တစ်ခုချင်းစီပါဝင်တဲ့ဖိုင်။
ဘာသာစကားအားလုံးမလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပူးတွဲပါ langstotranslate.txt တစ်ခုချင်းစီကိုပါဝင် file ဘာသာစကားကုဒ် တစ်ခုတည်းလိုင်းအတွက်ဘာသာပြန်ချက်အဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်ပို့နေစဉ်ဖိုင်တည်ဆောက်ပုံကိုကန ဦး စစ်ဆေးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးတိုးတက်မှုအတွက်အမှားအယွင်းများရှိပါကသင့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မပြုပြင်ချင်သောကြောင့်ဖောက်သည်အားတုံ့ပြန်မှုပေးပါမည်။
တစ်ခုတည်းကိုးကားမသုံးပါ ' စာသားတစ်ခုလုံးနှင့် HTML tags များ (ဥပမာ။ alt, title) - အားလုံးကိုထိုသူအားနှစ်ဆကိုးကားခြင်းဖြင့်အစားထိုးပါ ". အချို့သောဘာသာစကားများကို၎င်းတို့ကိုအသံထွက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် output ဖိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပျက်စီးစေသည်။
အထူးကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သင်္ကေတများ၊ အချို့သော "ထူးခြားဆန်းပြားသော" ဘာသာစကားများအတွက်မှန်ကန်သောဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအတွက်ကိုးကားချက်များကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် AI Machine Translator ဖြင့်ဘာသာစကားများအားလုံးကိုဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ဘာသာစကားကုဒ် အင်္ဂလိပ်အမည် မိခင်ဘာသာစကားအမည်
ဘာသာပြန်ရလဒ်များသည်စက်ဖြင့်စစ်ဆေးပြီး၊ အတည်ပြုပြီးရင်းမြစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုမရှိသောစာသား၏အစီရင်ခံစာသည်ပိုင်ရှင်အတွက်လက်စွဲစာအုပ်စိစစ်ခြင်းအတွက်ထုတ်ပေးသည်။
ဘာသာပြန်ခြင်းကိုမူရင်းဖိုင်ပုံစံဖြင့် your_files ကဲ့သို့သောဖိုင်များသို့တင်ပို့သည်။ * -> /your_files_translated.*
ဘာသာပြန်ထားသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ် CMS တွင်မူကွဲ ၂ ခုဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နာမည်နှင့်အတူ directory ပေါ်မှာ ဘာသာစကားကုဒ် ဥပမာ။ yourdomain.com/af/your_file_name.htm အာဖရိကဘာသာစကားအတွက်။ ဒီဖြေရှင်းချက်သည်အဓိကဒိုမိန်းဖိုင် & လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်။ စာမျက်နှာအသစ်မဟုတ်ဘဲပြားချပ်ချပ်ဖွဲ့စည်းပုံမပါရှိပါက၎င်းကိုအကြံပြုသည်မဟုတ် (nesting directory များမရှိပါ)
အဖြစ် wildcard (*) ခွဲဒိုမိန်းပေါ်မှာ ဘာသာစကားကုဒ် ဥပမာ။ ar.yourdomain.com/your_file_name.htm အာရဗီဘာသာစကားအတွက်။ အဓိကဒိုမိန်းဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမချိုးဖျက်နိုင်သော Universal ဖြေရှင်းချက်။ Subdomain သည်ထင်ဟပ်ပြီးအဓိကဒိုမိန်း၏မိတ္တူကူးထားသောဖိုင် / ဖိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အမည်များ / လင့်များဖြစ်သည်
ဒိုမိန်းခွဲများသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းပုံစံကို အခြေခံ၍ ဘာသာစကားမျိုးစုံပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြသရန်ရိုးရှင်းသော PHP script ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များ (သို့မဟုတ်အခြားဘာသာစကားများအတွက်) သင့်အင်္ဂလိပ်စာရင်းမြစ်မှရှုပ်ထွေးသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းသည်ဖိုင်အမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ (.TXT) သည်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည် FormatCoeficient သောတည်ငြိမ်သောကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကြီးမားသောသို့မဟုတ်မကြာခဏအမှာစာများအမှု၌ငါတို့သည်ဤကိန်းလျှော့စျေးပေးလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်” ထပ်မံ၍“ ပရိုဂရမ်” အနေဖြင့်“ ပရိုဂရမ်” အနေဖြင့် ထပ်မံ၍ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည့်ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ DataPreparationPrice
ဘာသာပြန်ဆိုရန်အတွက်စျေးနှုန်းများသည်ကီလိုဘိုက်ရှိဖိုင်အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည် FilesSizeKB တစ်ခုချင်းစီကိုဖိုင်၏ integer တန်ဖိုးကို + 1 အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွား (ဥပမာ။ 0.9 => 1, 4.1 => 5)
အမှာစာမရရှိပါက MTaaS စတင်ခြင်းအတွက်အပိုဝန်ဆောင်ခပေးနိုင်ပါသည်။ MTaaSInitialization
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆေးခြင်းကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးနိုင်သည် - ManualCheckCoeficient
စျေးနှုန်း = ( FormatCoeficient + ManualCheckCoeficient ) * ( FilesCount + FilesSizeKB ) * ဘာသာစကားများ + MTaaSInitialization
ကုမ္ပဏီများနှင့်အလွတ်တန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်မရှင်အပေါ် အခြေခံ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက် "သံအမတ်များ" နှင့်ပလက်ဖောင်း "အော်ပရေတာ" ကိုရှာဖွေနေသည်။
ကန ဦး အဆင့်မှာငါတို့ဘက်မှာအမိန့်ကို process ပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာပြန်မှု ၅ ခုပြီးသွားလျှင် "eGlobalTranslate Ambassador" သည်သီးသန့် ၀ င်းဒိုး application အတွက် -
ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက်ဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို decoding နှင့် decomposite
ကျွန်ုပ်တို့၏ AI Translator WEB API မှတစ်ဆင့်ဖိုင်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဖိုင်များကိုဘာသာပြန်ပါ
မူရင်းဖိုင် format နဲ့ encode နှင့်ပေါင်းစပ်ဘာသာပြန်များ